Waraannii Abiyiif TPLF gidduutti deemaa jiru waan baa’ee ifa gochaa jira. – Kichuu
HomeWaraannii Abiyiif TPLF gidduutti deemaa jiru waan baa’ee ifa gochaa jira.
Waraannii Abiyiif TPLF gidduutti deemaa jiru waan baa’ee ifa gochaa jira.
1. Waraannii kuni akka Abiy jedhu seera eegsisuuf otoo hintahiin Ethiopia barbaadu sana uumuuf akka tahe warra dur hinggalleef amma galaa jira
2. Waraanni kuni waraana haaloo bahuus of keessaa qaba (revenge). Waraana kana keessatti han qooda guddaa taphatani EPRP, Dargi, OPDO, ADP yoo tahani hundi saanii TPLF irraa haaloo qabu. TPLF fiif EPRP wal waraananii TPLF mohee biyyasaarraa ariheera. Dargiins akkasuma mohameera. OPDO fi ADP warra bojihamee waggoolii 27 aaf akka garbbicaatti bitamaa turanidha. Hundi saanii carraa arggametti dhimma bahuudhaan haaloo bahuu barbaadu .Jarri kun hunduu diina Oromootis. Kuni han waraana kana keessati han ifee bahedha..
3. Abiyfaa gammachuutti waan ariifatani fakkaata. Waraannii kuni waggoolii dheeraaf deemuu dandaha, hammuma waraannichi deemu jarri amma wajjin dhabbatan kuni walitti galagalu. Waa’ee Walqayitin wal qabatee dhiyootti Amaarif Abiy wal nyaachuu jalqabu. Abiyif kuni isuma “bofa hudduu lixe” jedhan sanadha. Yoo gadhiisani lixa yoo harkkisani cita. Yoo Amaaarati kenne “seeratu caba”, yoo harkkaa fuudha jedhe jaratu itti galagala. Kuni ciccita biyyattiif jalqabas dhumas tahuu mala. Oromoon kuni akka tahu baree of qopheessuu qaba.
4. Waraanichii akkuma tahuu mala henne (Risk analysis) biyyoolee baa’ee tuttuqaa jira, fakkeenyaaf Sudan. Abiyiinis qulla isa hambisaa jira. Oromoon kana sirriitti dimma itti bahuu qaba.
5. WBO cimsuun murteessaadha. Oromoon badiirraa of ooshuuf carraan inni qabu WBO cimsuudha. Oromoon of ijaaree, hidhatee arggamuu qaba. Yoo WBO cimme Oromoon abdii guddaa fagootti mul’atu qaba (Light at the other end of the tunnel). Hundi keenyya kanarratti tattaaffii gochuun nurra jira. Yoo kana gochuu dadhabnnee hunda keenyaaf qaanidha, seenaan nu gaafata.
Listen to these neoneftegna expansionist Individuals !!!”ከጦርነቱ በኋላ የአማራ ስትራቴጂክ አጀንዳዎች” – https://t.co/lNQAYEbTTE pic.twitter.com/hTKTELbvRf
— Kichuu (@kichuu24) November 29, 2020
#Ethiopia ጠሚ አብይ አህመድ ከህዝብ ተወካዮች ምቤት ለሚነሱ ጥያቄዎች መልስ ይሰጣሉ
For every action, there is an equal and opposite reaction. For Abiy to defeat his opponents and to consolidate the absolute power of the country he conspired with foreign countries and wage war on his political opponents and in particular now staging the final attempt to obliterate the last standing adversary which is the Tigray administration.
As saying goes, what goes around comes around. Alas! Redefining the rule and beating you in your own game …The war has just begun.
Soomaliyaanis Ambaasaaddara Isii Keeniyaatti argamu waamuun,.